मैले पारसलाई विवाहको प्रस्ताव गर्दा उनले यो हुन सक्दैन भने, त्यसैले म देह त्याग गर्ने कोशिष पनि गरे, ५ दिनसम्म कोठामा थुनिएर बसें: सोनिका – PathivaraOnline
Home > समाचार > मैले पारसलाई विवाहको प्रस्ताव गर्दा उनले यो हुन सक्दैन भने, त्यसैले म देह त्याग गर्ने कोशिष पनि गरे, ५ दिनसम्म कोठामा थुनिएर बसें: सोनिका
admin November 30, 2020 November 30, 2020 समाचार, समाज	0
पूर्व युवराज पारससंग नजिकको सम्बन्ध रहेको भनिएकी युट्युवर सोनिका रोकाय फेरी एक पटक राजसंस्थाको पक्षमा खरो उत्रिएकी छन् । उनी कोरोनाको जोखिम सुरु भएसंगै आफ्नो गृहजिल्ला बझागं पुगेकी छन् । पछिल्लो पटक पूर्व युवराज पारस शाहसंग सम्बन्ध विग्रिएको भनिएकी सोनिकाले त्यो भनाईलाई गलत सावित गरिदिएकी छन् । पारस विरामी भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि निकै भावुक भएकी सोनिकाले फेरी एक पटक राजनीति कुरा गरेकी छन् ।
उनले पारसका बारेमा निकै बखान गरेकी छन् । उनले राजतन्त्र नै सकिएपछि उनका बारेमा नकारात्मक कुरा नगर्न आग्रह गरेकी छन् । उनले पारसलाई बुझ्न सबैसंग आग्रह गरेकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘उहाँ पागल भएको मैले आफ्नै आँखाले देखेकी छु । त्यत्रो राजसंस्था जाँदा उनमा के बितेको थियो होला ? कुनै मानिस प्रेममा धोका खाँदा त कति दुखी हुन्छ भने त्यती धेरै वर्ष राज गरेको राजतन्त्र जाँदा कस्तो भयो होला ? तर त्यो भावना कसैले बुझेन ।
उनले आफुले पारसको अवस्था देखेर उनको निकै ख्याल गरेको बताइन् । उनले पारसको बंश पनि बझागंको भएका कारण आफुप्रति उनको झुकाव रहेको बताएकी छन् ।उनले पारससंग आफुलाई विवाह गर्न आग्रह गरेको बताइन् । उनले एक भिडियोमा यो कुरा सार्वजनिक गर्दै भनेकी छन्, ‘उहाँले मलाई राम्रो वाटो देखाउनुभएको थियो । गुरु र चेलीको सम्बन्ध हुनुपर्ने तर मेरो मनमा पा प आयो ।’
anuthokhabar.com बाट ।
नेपाली सेनाको परिवार कसरी सखाप भयो ? यी आमाले खुलाइन वास्तविकता (भिडियो)
जेठ महिनाको अन्तिम शुक्रबार सम्म तपाईको समय कस्तो रहला ? हेर्नुस्